Career - Mobile Mother
လူကြီးမင်းတို့ ရဲ့ တမူထူးခြားတဲ့ အရည်အချင်းတွေကို အပြည့်အ၀အသုံးချနိုင်ဖို့နဲ့ ဘ၀ရဲ့အောင်မြင်မှု့ပန်းတိုင်ကို အရောက်လှမ်းဖို့ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုကုမ္ပဏီက လူကြီးမင်းတို့ကို အမြဲစောင့်ကြိုလျက်ရှိပါတယ်။ အနာဂါတ်ဘ၀အာမခံမှု ပေးနိုင်ပြီး အကောင်းဆုံးသော လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပျော်ရွှင်စွာအဆင့်မြင့်မြင့် အလုပ်လုပ်နိုင်မယ့်အခွင့်အရေးကို လက်လွှတ်မခံပဲအမြန်ဆုံး လာရောက် ဆယ်သွယ်လို့ ဘ၀ရဲ့ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကို လျှောက်လှမ်းကြပါစို့ ခင်ဗျာ….။
ကျွန်တော်တို့ မိုလ်ဘိုင်းမားသား မိသားစု၏ အလေးထားဆုံးမှာ လူသာလျှင် အဓိကဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀န်ထမ်းတိုင်းကို တပြေးညီ ညီညွတ်မျှတစွာ လေးလေးစားစား ဆက်ဆံပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုကုမ္ပဏီ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ၀န်ထမ်းများကို သင်တန်းပေးခြင်းနှင့် လူသားအရင်းအမြစ်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏မိသားစု၀င် ၀န်ထမ်းတိုင်းအား လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု စွမ်းရည်နှင့် ပင်ကိုယ်အရည်အသွေး မြင့်မားစေခြင်း စသော တစ်ဦးချင်း ဘက်စုံအရည်အသွေးမြင့်မားလာနိုင်ရန် ဦးတည်စွမ်းဆောင်ပေးနေသော မိသားစုကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။
Assistant HR Manager (၁) ဦး
Any Graduate, Certificate of HRM (or) MBA Holder is more prefer.
At Least (2) Years Experience in related field.
Description ဘွဲ့ရ၊ အသက် (၃၅−၅၀)နှစ်ကြား၊ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၃) နှစ်နှင့် အထက် တာ၀န်ထမ်းဆောင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ Duties & Responsibilities HRM Plan ကို ကောင်းစွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ လျှောက်လွှာပိတ်ရက်၊ နို၀င်ဘာလ (၂၈)ရက်၊ ၂၀၁၄။
Assistant Finance Manager - အမျိုးသမီး (၂)ဦး
ဘွဲ့ရ၊ အသက်(၃၅−၄၅)နှစ်ကြား၊ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(၃)နှစ်နှင့် အထက် တာ၀န်ထမ်းဆောင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။
လျှောက်လွှာပိတ်ရက်၊ နို၀င်ဘာလ (၂၈)ရက်၊ ၂၀၁၄။
ဧည့်ကြို/ အရောင်း၀န်ထမ်း - အမျိုးသား/အမျိုးသမီး (၂၀)ဦ:
ဘွဲ့ရ၊ အသက် (၁၈−၂၅)နှစ်ကြား၊ ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ပြီးလူမှု ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ စကားအပြောအဆိုချိုသာရမည်။ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိရမည်။ Team Work အလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Office Staff - အမျိုးသား / အမျိုးသမီး - (၆)ဦ:
ဘွဲ့ရ၊ အသက်(၁၈−၂၅)နှစ်ကြား၊ ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ပြီး လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ စကားအပြောအဆို ချိုသာရမည်။ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိရမည်။ ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
ရုံးသန့်ရှင်းရေး − အမျိုးသမီး(၃)ဦး